50 taona nanaovana sokitra : Hampiseho ny fivoaran’ny asa tanany i Solomon Manan’Art
Malagasy manan-talenta eo amin’ny sary sokitra. Efa maherin’ny 50 taona no niangalian-dRakotomanana Solomon na Solomon Manan’Art io zava-kanto io, ka hampiseho ny fivoaran’ny asa tanany nandritra izay fotoana izay amin’ny alalan’ny fampirantiana hotanterahina etsy amin’ny …Tohiny
Tsy mijanona fa mitohy hatrany ireo fanenjehana ireo mpiasam-panjakana matoatoa. Ireo izay efa tra-tehaka, dia terena handoa ny vola noraisiny nandritry ny naha “fantôme” azy. Misy no asaina mamerina 5 hatramin’ny 10 taona, arakaraka ny …Tohiny
Fotoana iray nanamafisan’ny fianakaviamben’ny Kung Fu Wisa ny firaisan-kinany ny sabotsy teo, teny amin’ny « Temple de Pierre Mizael » Ambatomirahavavy. Vory lanona tamin’io fotoana io avokoa mantsy ireo « maitre » Kung Fu sokajy …Tohiny
Salazamay Toamasina : May ny magazay fitehirizana jirofo
Nidedadeda indray ny afo tany amin’ny faritanin’i Toamasina, ka lasibatra tamin’izany ny toerana fitehirizana jirofo tao Salazamay. Omaly tokony ho tamin’ny 04 ora maraina tany ho any no nitrangan’ity firehetana ity, ka tsy niandry ela …Tohiny
Nanao valan-dresaka tetsy amin’ny Carlton Madagascar omaly maraina ny minisitry ny Vola teo aloha, Gervais Rakotoarimanana rehefa nitantana izany ministera izany nandritra ny roa taona sy tapany. Nisento tokana teo anatrehan’izany ireo olom-boafidy isan-tsokajiny avy ...Tohiny